Nezve saiti nyowani uye zvimwe zvinhu zveXubuntu | Kubva kuLinux
Yakanga yave nguva kubva pandakashanya xubuntu.org Pamwe ndosaka ndangoshamisika neiyo nyowani dhizaini saiti, yakafuridzirwa hazvo, mu Ubuntu.com.
Ndiri kunyatsofara nezve shanduko, sezvo dhizaini yapfuura yaiita senge jee, yakapusa, asi isina hunhu. Kunzwa kwekusiiwa kwayakaendeswa kwandiri kwakawedzera nekuwedzera, kudzamara yasvika mukuparadzirwa saizvozvo, kuti kusvika vhezheni yacho 11.10 yakanga yakaremekedzwa zvakanaka nekuda kwangu. Asi zvinhu zvachinja, uye ikozvino webhusaiti yacho inondikurudzira neukomba, kurudziro, uye ini ndanzwa pfungwa dzakanaka kwazvo kubva mukuparadzirwa.
Avo vanondiziva vanogona kushamisika nezvandaive ndichiita kufamba munzvimbo idzodzo, uye zvirokwazvo pane tsananguro yakapusa pane izvo. Ndiri kufunga zvakanyanya nezvekushandisa Xubuntu 12.04. Uye ini ndinotsanangura nei.
Ndisati ndapinda muzvikonzero zvinonditungamira kuita iyi sarudzo, ndinofanira kujekesa chimwe chinhu chandinoona chakakosha: Handina chandinopokana nacho Ubuntu sekugovera. Zvisinei nesarudzo dzingaitwa naSekuru Maka uye chidimbu chavo, ndinofunga Ubuntu Icho chimwe chezvikamu zvakazara kwazvo zviripo kune mushandisi we GNU / Linux. Ini handina basa nezvivakwa zvevashandisi, handizvo zvinoita kuti ndide kusvetukira kwazviri Xubuntu, asi pachinzvimbo huwandu hwakazara hwemapakeji mune avo ekuchengetera, kusanganisira iyo PPA.
ndinofarira Debian. Zvave, zviripo uye zvichave, kugoverwa kwandinoda, asi kune zvinhu izvo dzimwe nguva zvinove zvinondishungurudza. Ini ndiri mushandisi anofarira kugara achiedza zvinhu. Nezuro ndanga ndichitsvaga nzira yekuisa iyo GlobalMenu en Xfce, Ini ndanga ndichiedza kupa desktop yangu kutarisa uye kunzwa senge OSX, uye ini handina kuzadzisa chinangwa changu. Kutanga, mazhinji emapakeji andakakwanisa kuisa anobva Ubuntu, uye pandakafunga kuti zvese zvaizonaka, iko kunyorera hakuna kushanda sezvanga zvichitarisirwa, pamwe zvaida kutsamira kwekuti kune Guess chete kupi? Hungu hongu, mukati Ubuntu.
Zvinondishusha zvakanyanya Ubuntu paradzana zvakanyanya kubva Debian mune ichi chinhu chechinhu, asi hei, handiyo pfungwa yacho izvozvi. Kunyangwe ndichifarira kugadzirisa zvese nenzira yandinoda uye chii, ndinofunga ndinazvo "Wakura" sekutaura, uye pane nguva dzose zvandinoda ndizvo "Isa nekushandisa". Saka ndicho chikonzero chikuru chechisarudzo changu: Revenue ine base Debian, nhamba hombe kwazvo yemapakeji iyo yaanondipa Ubuntu. Ini ndinojekesa, ndiri kungofunga nezvazvo, hazvireve kuti ndinopfuurira kumberi.
Kunyangwe kana ndikafunga nezvazvo, ini ndaigona kuisa kumisikidza kubva kune iso re Ubuntu-Server sekunge yaive netinstall en Debian uye gadzirisa zvandinoda. Ndiyo sarudzo yandisiri kuzotonga kunze, uye pamwe ndinogona kuwana yakachena kumisikidzwa ye Xfce. Chinhu chega chinoita kuti ndisave nechokwadi, ndicho icho Ubuntu Mukuda kwako kuunza yako distro padyo nemushandisi wekupedzisira, bvisa mashandiro auchazoda iwe, muenzaniso weiyi matanda ehurongwa, asi hachisi chinhu chisina mhinduro.
Zvakanaka, hapana, kuburitswa kweshanduro 12.04 kuri kuswedera uye tichaona, kana ndikazviisa panjodzi yekusiya mudiwa wangu Debian.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Nezve saiti nyowani uye zvimwe zvinhu zveXubuntu
Mune maonero angu, kushandisa Ubuntu sehwaro hweXfce kunopesana nekuti zvinotoda zvimwe zviwanikwa kupfuura chero kumwe kugovera. Debian + Xfce yakajeka zvikuru. Zvino, kana usina matambudziko eCPU / RAM uye uchida Xfce, sezvawataura Ubuntu + Xfce ndiyo yakanakisa sarudzo yekuyedza mapakeji. Ini pachangu ndaizosarudza chero kumwe kureruka kugovera kuisa Xfce mairi, chaizvo.
Ehe, ini ndakaedza Xubuntu mune dzakapfuura shanduro uye ndinoziva kuti Debian yakareruka neXfce, asi inofanirwa kunge iri yechinhu chimwe chete icho chandataura kune ianpock's
Rondedzero ndeyekuti havazi vese vane ruzivo rwekuisa hwaro system, uye zvishoma nezvishoma nekuisa nharaunda, vashandisi vevanoverengeka havangashinga kutarisana neizvi ... uye ndipo Ubuntu paunouya nemhinduro dzayo "dzakagadzirira" (Kunze yebhokisi) 🙂
Zvakanaka, patova nePPA (YeMunhu Pakeji Archive) uko iwe kwaunogona kurodha pasi nekumisa pasuru kuti uve nemenyu yepasi rose muXFCE (zvirinani muBuntu).
Ingo wedzera iyo PPA uye isa iyo xfce4-appmenu-plugin chiratidzo-appmenu appmenu-gtk appmenu-qt mapakeji. Muenzaniso:
sudo apt-wedzera-repository ppa: iyo-warl0ck-1989 / xfce-appmenu-plugin
sudo apt-tora && sudo apt-tora kuisa xfce4-appmenu-plugin chiratidzo-appmenu appmenu-gtk appmenu-qt
Uye isu tinowedzera iyo App Menyu kune iyo XFCE pani.
zvakanaka, mushure mekunge ndaona iyo ubuntu,
Ini handisi kuzosiya debian nekuda kweizvozvo, chero zvakadaro ndaizoshandura desktop,
Izvo hazvisi zveGlobalmenu kana AppMenu chero chaunoda kuidaidza, zviri nezve huwandu hwemapakeji anowanikwa iwo muDebian ndinofanira kuita zvemashiripiti kuisa.
Unganidza uye gadzirisa kutsamira neruoko 😉
Asi izvi zvinoshanda here paXubuntu 13.10 (kana zviri pachena) mushanduro dzinopfuura 11.04 (ndinofunga ndinorangarira kuti 12.10 yanga isiri kuenda) kana zvakadaro ndaigona kuyedza iyo Voyager Linux nyowani inotyisa) kana kunyange ubuntu studio iyo iyo Chinhu chete chakashaikwa ichi, uye zvinounza Xfce pachinzvimbo cheUbatana, ini ndichazviedza mune virtualizer tigoona
PS Kune hupenyu hunopfuura kubatana
Asi izvi ndezve oneric chete uye zvichave zvakafanira kumirira kuti ibude kune mamwe maazvino vhezheni, zvisinei ini ndichaedza mune virtualizer ine UbuntuStudio 14.04 kuti ndione kana ichishanda
Enda enda xD Usazvidya moyo, ini handisi kukutonga nekuda kwekuda Xubuntu. Ndisati ndashandisa Debian Xfce ini ndaishandisa Xubuntu 11.10, uye ndinofanira kukuudza, haina kumbobvira yakaipa (kunyange isiri yakajeka seDebian, ndinokuvimbisa). Uye zvakangoitikawo kuti ini ndanga ndichiedzawo kuisa Xfce's Global Menyu paDebian uye ini ndanga ndisingakwanise, kunyangwe ini ndikaisa zvese zvinoenderana zvaiita kunge zvinodikanwa.
Uye haufanire kusiya Debian zvachose, unogona kuishandisa, pamwe neimwe desktop yekuyedza.
PS: Chero isu takafanana zvakanyanya kana iwe ukaverenga pfungwa ...
Zvakanaka, kunyange zvichiri kubatsira, kana zvabuda kana ndiri kuzoisa xubuntu 12.04
Ehe, yangu yakavhurikaSUSE haina kuibvisa.
Damn lizard, ndinomuvenga xD
Zvakanaka, ndanga ndichienda neyekupedzisira kwemwedzi uye kusvika parizvino hazvina kundikundisa, ndinongoshandisa izvo zvakajairika.
Ala akawana asipo pandakanga ndiine archlinux uye debian, kuti dai vaive vanonaka ...
Uine mwedzi hapana chaunoita, pamwedzi mitanhatu inodzoka ...
Mhoroi, ndanga ndichingofunga kuyedza kuisa xubuntu (kana imwe mwenje distro) pakombuta yekare, p-III, 501MHZ uye 320 RAM ine win-xp uye haina kushata zvachose, asi ndinofunga ichave yakawanda jira reizvozvo komputa, yaizoshandiswa na "amai" vangu kusevha mambure, mimhanzi uye senge yekupedzisira nzira pandinokwenya pc yangu
Ini handisi kuzoisa Xubuntu, asi Xfce muUbuntu iyo isina kufanana ... 😀
Ini ndakaisa xubuntu 10.04 uye ndinogona kuvimbisa kuti yakaenzana kana inorema kupfuura ubuntu 10.04. Kana iwe ukandiudza kuti ndiite yakachena kumisikidza kubva kuUbuntu server, zvakanaka uye ini handizvinzwisise.
Iwe uchafanirwa kuita basa rakafanana sepana debian inst yeiyo ubuntu server, kune izvo zvinoshandiswa ????????
Isu tinoenda neruzivo rwauinaro uye nebasa rakanaka hazvizove zvirinani kuisa archlinux uye ipapo zvirokwazvo mashandisiro eaur, iwe unenge uine zvinopfuura zvakakwana ...
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mune canonical distros mune nzvimbo chete yeimwe, zvirinani kuti vagadziri vafunge izvo, nekuti basa rakawanda pamifananidzo uye nevamwe, asi vamwe vacho vanogona kunge vasiri vepamutemo kana kuva navo semazita epakati ...
Chaizvoizvo iwe unofanirwa kuona izvo zvinopedza muXubuntu. Kana mumwe munhu achigona kundiratidza kuti iyo Debian Kernel yakagadziridzwa kupfuura yeUbuntu uye kuti nekuda kwechikonzero icho inoshandisa zvishoma, saka ini ndinonyarara. Ini handinzwisise kuti iwo mashandisiro akafanana anogona kudya zvakanyanya mune imwe distro kupfuura mune imwe. Ndakagara ndichifunga kuti kudyiwa kwakanyanya kweUbuntu kuri nekuda kwehuwandu hwemadhimoni anomhanya kuti aite kuti hupenyu hwemushandisi huve nyore, uye nekumisikidza (padyo) zvingangodaro zvisina kudaro.
Ini ndichangobva kuverenga muChirungu blog kuenzanisa pakati pebianian xfce4 uye ubuntu server xfce4.
Munyori airatidzika chaizvo, fanboy chaizvo Debianita asi nechimwe chikonzero chisinganzwisisike akashamisika akatoti akadya zvakati wandei.
Akafarirawo kuti izvo zvekuvandudzwa zvakapfuura makore mashanu, chinhu zvakare chekutarisa kana iwe uchida kuve nechikamu nezvinhu zvako zvidiki uye usatombo kunetseka.
Parizvino ndiri kuzviona uye ndichaona mafambiro azvinoita, nenzira yandakaverenga elav pane imwe blog yako, nguva refu yapfuura chidzidzo chawaive nacho chekugadziriswa kwedhiian, ndakaifarira, uye izvozvi zvandinoyeuka ndinokukorokotedza!
Ndatenda ^^ Zvingave zvakanaka kuwana chinongedzo kune iro blog kuti uverenge 😀
Zvino tichitarisa mutsauko wezviwanikwa pakati pebianian xfce uye xubuntu, ndinoona kuti xubuntu inoda 3 gb yedhisiki rakaomarara, ndiko kuti katatu kutaura kwazvinofanira kuita.
Ini handinzwisise kuti sei zvakanyanya chokwadi, zvinoita sekushamisa kwandiri ..
Pamwe ine mazana matatu ezviuru zvekushandisa uye zvirokwazvo mamwe akawanda ekushandisa kana uchitanga ...
Mencanta mhinduro yako uye zvimwe zvinouya kubva paWindows !!! 🙂
haha basa rechikoro XD, asi zvakanyanya @elav anoshandisa arch
Kwete, shandisa Debian. Arch haina kuzondipfuudza kweinopfuura vhiki mbiri nguva dzandakachiisa. ^^
Akaishandisa kwechinguva ... ipfupi, ipfupi, asi ipapo yaive hehe
Ipa muenzaniso uye iwe unoshandisa iyo shit yaunoshandisa (inoonekwa mu logo) Mierdows Aereo kana chero chipi zvacho
Zvakanaka, hongu elav, zvingave zvakanaka kuiverenga, chii chinoitika kuti ini ndinoiverenga kubasa uye hapana nzira yekupenga yekuwana iyo peji, sezvo ndakazviita ne firefox ndisingazivikanwe, ndinofungidzira kuti paizove neimwe nzira yekuiona asi ini handina Ndinoziva.
Izvo hazvisiye nhoroondo, kunyange ini ndichaedza kukutsvagira chimwe chinhu chakafanana 🙂
Izvo zvaisazove izvi, handiti?
Kwete kwete, yaive chinyorwa chakashanda zvakanyanya, huya, zvinonditsamwisa kuona chakarasika
Mushure memwedzi iwe uchasiya Ubuntu kana ukadaro, iwe uchaona xD, yakawanda kuisa nyore asiwo kuputsa nyore.
Haisi izvo zvandaitsvaga asi ………
Ndakaiverenga kuti ndione kuti sei
Mashoko akanakisa andakaverenga mune yese posvo
Huye, heino xubuntu mushandisi kubva mushanduro 9.04 ari kutsvaga dzimwe nzira ...
Ini ndinoshandisa xubuntu 11.10 uye ndiri kusvika ku ********. Semuenzaniso vanoisa daemon yebluetooth uye kana iwe ukaedza kuibvisa, inokuudza kuti ichabvisawo xubuntu-desktop.
Ukayedza kubvisa bluezman, inokuudza kuti ichabvisawo makara-tsamba ...
Ukayedza kusunungura libgnome-bluetooth8, inokuudza kuti ichabvisa network-maneja ...
Kune rimwe divi, iyo "notify" ye xfce inoshanda sezvainofarira uye isingapindure kune chero sarudzo yekumisikidza nekuti kristu akaiswa nechimwe chiratidzo chinopinda muXubuntu, hongu kana hongu.
Ivo vanoshungurudza gnome maraibhurari zvakanyanya kusvika padanho rekuti rinotaridzika seUbuntu iyo inobvisa kuoneka kweGnome uye inoisa Xfce pamusoro, muchokwadi ndicho chimwe chezvikonzero nei Xubuntu iri "inorema" uye inotora RAM yakawandisa.
Xfconfd uye gconfd-2 zviri kumhanya panguva imwe chete, ndinoshamisika kuti komputa haisvetuke yega mbiri nhatu.
Uye iyo Xfce timu yekusimudzira iri kushanda kubvisa zvese zvinotsamira paGnome ...
Uye pamusoro peizvozvo, kudzimara makore asingasviki maviri apfuura Jannis Pohlman (mumwe wevanonyanya kushandira Xfce vagadziri) akatamba chinzvimbo chekubatana pakati pevagadziri veXfce uye Xubuntu timu. Mushure me "musangano" muBarcelona, ​​Jannis akaburitsa mune rondedzero yevanogadzira kuti akabva asiya basa iri uye haana kupa chero tsananguro yekuti sei (kana chero munhu akamubvunza). Sekuziva kwangu hapana mumwe munhu atora batoni kana kupihwa kuchengetedza chero mhando yehukama neve Xubuntu vanogadzira.
Saka kana iwe uchida kuyedza Xubuntu enda kumberi ... asi iwe unotoziva maonero angu
PS: Ndiri kuchengeta ziso paLinux Mint Debian Edition Xfce, inoshanda sei?
Pindura kune cryotope
Vhocha. Izvi ndizvo chaizvo zvinoitika neXubuntu, inoisa meta-package izere nekutsamira kweGnome, izvo zvinonditungamira kufunga kuti ndicho chikonzero chikuru chekushandisa kwazvo. Ndokusaka ini ndichida kuyedza nekuisa neUbuntu-Server sezvo zvinoita kwandiri kuti Ubuntu haina netinstall. Zvisinei, kana ndaita ini ndichakuudza, kunyangwe ndichidzokorora, ndangofunga nezvazvo ..
Chaizvoizvo, ndakashandisa Xubuntu (uye Ubuntu) kwechinguva uye zvakaitika kwandiri chinhu chimwe chete pandakanga ndichida kubvisa madhimoni nemapakeji andaisada (zvinonzwisisika zvakare Bluetooth) Uye chakaipisisa pane zvese ndechekuti pakupedzisira, mushure mekuvhiringidza kwemazuva, ndakakwanisa kuisiya sekuda kwangu, zvakazoguma zvatyora zvese, uye kana mushure mekudzoserwa kakati wandei ndakazokwanisa kuzvigadzirisa zvandinoda, mwedzi inosvika mitanhatu yaizosvika, uye sezvo ini ndichida kuve nezvose zviripo, ndaifanira kuisa zvakare (kugadzirisa kana kutaura) uye kumashure kumutambo mumwe chete. Kwaive kuchema. Pakupedzisira ndakafunga kusazomboshandisa cyclic zvakare.
Uye chenjera, maPPA akanaka, asi iwo haasi iwo mashura, kamwe kamwe (uye kakawanda kupfuura zvaanofanira kuita) kunyangwe tsaona dzine mukurumbira mune yekuvandudza.
Kune imwezve imwe nzira yekutumira iyo bluetooth dhimoni kuti itore cu **. Iwe unoisa RCConf uye wapedza 😀
Ndichishandisa Fedora 16 neXfce, ndanga ndichiita zvakanakisa. asi ini ndanga ndatofunga nezvekudzokera kune wangu anodikanwa Debian neXfce kuti ndione kuti sei.
Pane inogadziridza Fedora iri nani pane Debian kana ndiri kukanganisa?
Kwete kungoita debian, chero kugoverwa.
Ini ndakaisa fedora pane pendrive rimwe zuva (ndichida kuziva nekuti ndiyo yekutanga distro yandinogona kuisa pane pendrive) uye haisi yechinhu asi inorovera mukati, inopwanya nguva zhinji uye zvinoshandiswa zvinotora nguva yakareba kuvhura, pamwe ndizvo yeiyo yekuisirwa mu pendrive kana yangu Intel kadhi asi ...
Imhaka yekuisirwa pendrive ...
Ini ndinonzwisisa kuti fedora inogara iri pamusoro pezvese ... kunyangwe pamberi pe debian.
Zvino zvarinotaura «» ichokwadi hakusi kuisa distro uye kuigadzirisa zvakare kuti ive yechikara, iri "Isa nekushandisa" ndosaka ubuntu uye linux mint vari kuhwina kurwa, kunyanya linux mint imwe inoiisa uye ndizvozvo! kushandisa chero zvazviri nekuti zvese zvagadzirira! izvo hazvina kushata, pane zvinopesana, ese ma distros anofanira kunge akadaro.
Saka ndeapi mamwe ma distros e?
Papa hapana zano .. asi chandinoziva ndechekuti zano rekushandisa system rinofanira kushandiswa, kwete kuisa ruoko pariri kudzamara richishandiswa. Hakusi kukoshesa kwandinoita pachedu.
Sezvo iwe uchiti "pfungwa iri"
Zviri nyore, iwe une windows uye kana iwe uchida ubuntu / mint.
Kana pfungwa iri yekudzidza mashandiro ayo, pane iwe une archlinux, gentoo nevamwe.
kudzidza kwakanaka ... asi havazi vese vanoda kushandisa nguva yavo vachiona mashandiro ainoita painoshanda. Ini ndinofunga ruzhinji rwevanhu vanofunga seizvi ...
Iyo inyaya yekuravira ... asi nditende ini kuti zvakaoma sei kuzvigamuchira, mumiriri anoda kuti zvese zviuye kuitwe, tinoda kuwana mapakeji uye toshandisa iwo, vamwe vanofarira kuve mune nyowani zvese nezvimwe.
Chinhu chakanaka ndechekuti kune nzvimbo yemunhu wese uye pachagara paine distro inoenderana neizvo zvauri kutsvaga. 🙂
Ndine mini HP, uye ndinoona kuti kweinopfuura gore nehafu ndanga ndichiisa Ubuntu kubva kuPendrive. Uye kutaura chokwadi, hapana chakambotyoka. Ini ndinofanira kutaura kuti mune irwo ruremekedzo 11.04 yaive isina kugadzikana, 11.10 iri rakanyanya kupenya vhezheni. Dzimwe nguva ndinofunga kuti avo vane ruzivo rwekufamba-famba vachigadzirisa nekugadzirisa zvese, pakupedzisira nekusanzwisisa mashandiro anoita zvimwe zvinhu, vanopedzisira vashatisa zvese.
Nguva zhinji ini ndaona kuti dambudziko harisi iro distro, ndiye mushandisi asingazive maitiro ekuziva izvo zvavanoda. Vazhinji vanongoenda kubva kudzidziso kuenda kunedzidziso vasingazive maitiro ekuita zvinhu ivo pachavo.
Ichokwadi chaizvo. Ini ndaishandisa Ubuntu kweanopfuura gore uye ndinofanira kuti, zvinhu hazvina kuputsa sezvakangoita. Iko kusagadzikana kwe Ubuntu, inogona kufanana nechero kumwe kugovera kune imwe Hardware, kunyangwe mushandisi, anogara aine% yake yekukanganisa mune izvi zvese.
ZVINOKOSHA ... elav <° Linux iwe haugone kuitsanangura zvirinani.
Ndosaka ndichiremekedza zvikonzero zveumwe neumwe, hapana distro yakaipa, inoitwa kuti ipe chimwe chinodiwa, kana ichityora imhaka yemushandisi akaisa ruoko rwakawandisa pairi.
Pandakatanga mu linux, ini ndaishandisa Ubuntu 11.04 uye izvo zvakaisa ruoko rwangu kunyangwe mumumvuri .. uye nekuda kudzidza zvakajeka! Ndakaikanganisa zvisingaverengeke kakawanda, asi ini ndaidzidza .. Kana system ikakuvara mushandisi zvakare ane imwe nhanho yekukanganisa. Kutaura kuti debian sid kurudziro yakaipa kwakashata, nekuti kana mushandisi achingoisa izvo zvinodiwa uye asingawane ruoko rwakawandisa, iyo system haizopwanya. zviri nyore. (Ini ndinoisa iyo debian sid kesi semuenzaniso)
elav <° Linux unogona kundigadzirisa chero nguva kana ndiri kukanganisa 🙂
Ichi ndicho chikonzero ini ndinovenga ubunto, nekuti vanogara vachikodzera.
Pano tine muenzaniso wakanaka
Izvo zvine elav <° Linux kana iri neni?
Ndinofungidzira izvozvo TDE, asi iwe hauna hanya nemwana.
Nhasi handisi webhuru saka ndinozvitenda kana iwe usina kubata mabhora angu
Ndokusaka iwe uchingova usina hanya neni, iwe hausi chimwe chinhu kunze kwekupusa troll.
Chokwadi unoshandisa Shit
Endai munotora OS yakanaka, mienzaniso Fedora / mint / Arch kunyangwe Ubuntu zvese zvakakosha zvishoma pane izvo Mocosoft crap
Zvavanotaura nezve "nyore kuisa uye nyore kupaza" zvinoita kwandiri kuti hazvisi izvo ... muUbatana zvinhu zvinoputsa, asi kuve mune gnome shell neUbuntu HAPANA.
Ini ndaishandisa ubuntu uye linux mint kwemakore (nemhando dzese dzematafura. Iye zvino ndanga ndichishandisa Fedora ne KDE kweinenge mwedzi miviri uye ndiri kufara kwazvo. Nenzira, kuti Fedora ive yakagadzirira kushandisa, haufanire kuita zvakawanda kupfuura muUbuntu kuti igadzirire kushandiswa (wedzera imwe repo, isa macodecs, flash uye zvirongwa zvaunoda kushandisa)
Nezve mushandisi weAsuarto, kana iyo pendrive ichinonoka, kunge Fedora inorarama cd iri kunonoka.
Kasio eh munhu ane huti yebhuruu, kana iwe ukabvunza kuti sei ndichiti hongu, hazvo imhaka yekuti ndiri mushandisi we fedora, ndinongofamba ndichitenderedza Debian Sid lol, ikozvino iyo fedora inononoka kana zvichiwanzoitika.
Kunyangwe usinga zvitende, Jamin Samuel fedora ane mapakeji nyowani kupfuura sid uye kuyedza, ini ndinogona kutokuudza "ndoda par" ne arch uye gentoo.
Kana zvakatowanda, uchifunga kuti Fedora ndiyo distro uko kwakawanda kwenyaya kunobva 😀
Zvino hongu asi ndikazvitaura ndinonyepa
Asi mwanangu, pandakataura kuti kunyepa kuti Fedora ndiko kugovera kunogara kuchisanganisira nhau zhinji?
Zvinoenderana newe, ini ndiri mhando yemushandisi uyo anoti Fedora ndiye anovandudza zvakanyanya.
Ini handibvise chirevo nekuti ipapo unotsamwa
WAO! ... zvakanaka izvi ndizvo zvandaida .. kutaura nevashandisi vebhuruu ngowani 😉
Ini handina kutora nhanho kuenda fedora nekutya kusawana mapakeji andinowanzo kuwana mu ubuntu, senge:
- Soundconverter (inonzwika inoshandura)
- Chromium Bhurawuza
- Evince (Gwaro Fomati (PDF) mafaera)
- Nyore Scan
Kana iwe uri kundiudza kuti mu fedora pane matsva mapakeji pane ekuyedza debian uye sid (O__O) hama, saka chii chatinoita nekupoterera matunhu enedian? sei tisiri kushandisa fedora ??
Ini zvirokwazvo ndichadzidza kushandisa fedora ..
mhondi inondiudza chimwe chinhu, mapakeji andataura aya anowanikwa mu fedora? uye vanogona sei kuiswa?
kujekesa kurasa GDebi uye Synaptic
mhondi inouraya marara uye kasio libreoffice 3.5 iri pa fedora 16 ??
Tarisa izvi: https://blog.desdelinux.net/buscador-de-paquetes-para-varias-distros/
Kugona! baba maita basa kwazvo 😉
Zvakanaka, pane zvese zviri mu fedora kusara kwemamwe mapakeji ayo anoshandiswa mu dhibian uye zvigadzirwa, zvakanaka uye nei ndiri mu debian nekuti pane chimwe chinhu chinondirovesa hana, mu fedora iri kuzove kubva ku vhezheni kuenda ku vhezheni, uyezve yangu backups haasi madiki uye nekuti ini ndoda kumbotenderera, gadza kamwe uye handichazomisazve uye ndinopenga kuita fedora rawhide repos, kunyangwe ndiri kuzodzokera ku fedora usazvidya moyo nezve izvo, kunyangwe ini ndisina iwe unofunga kuti ndinoda kuyedza mamwe ma distros, ndosaka fedora iri yangu # 1 distro ah debian ini ndinotova nayo senzira yangu yechipiri apo fedora iri kundikundikana pazvinhu X, kana ndikasashandisa arch imhaka yekuti haiende neni uye kunze kwayo kwaizoparadza huzivi hweKISS hehe
mhondi inouraya marara ndiwe pabazi Sid kana pabazi Testing ?
Uri kutaura kuti mukuyedza uye mune imwe haizombo dzoreredzwa zvakare .. \_ O / Ini handina kurangarira kuti xD ​​ndinofunga kuyedza kunondidaidza xD ahahaha chinhu chakashata ndechekuti zvinotora nguva yakareba ¬¬ uye ini ndoda kuve negnome shell 3.4 mwedzi uno kana zvirinani vhiki mushure mekubva .. kwete handizive kana bazi Sid Iwe unenge unayo mumazororo ako mazuva mashoma mushure mekubva 🙁
Wangu anodikanwa Jamin Samuel Ndiri kushandisa debian sid, uye sezvo gnome shell 3.4 ichiri kusasvika munzvimbo dzepad, ini ndangoti ndine zvimwe zviri kutovandudzwa kuenda 3.4, semuenzaniso faira roller iro ratove mushanduro 3.3.92. XNUMX zvirinani mune debian sid, uye woenderera mberi uye kuyedza kuyedza kwedhibi, uye kana ukazvimonera zvakanaka zvimhanye uye woedzazve hehe.
Kuti ndikuuraye… Trade Debian yenzvimbo iyoyo yakatsemuka… handizive kuti cenutrius yerudzii yaizoita izvozvo.
Kunze kwekufungidzira iwe kwaunoisa kupusa, iwe unonyatsoda yese shit iyo Xwinbuntu inouya yakajairwa? Asi kana pasina munhu anochida.
Uri kutaura nezvokusununguka here? Uchishandisa Debian? Sezvo Debian iri nyore, hapana musiyano pakati pekuoma kwaDebian neiya yeXwinbuntu.
Ndiri kuona zvinhu zvisirizvo newe murume ...
Zvikonzero zvisina musoro zveani, iwe? Zvakanaka, ini ndini ndinofunga kuisa Xubuntu, kwete iwe mwana. Ini handione chero chakaipa nekushandisa mapakeji ari munzvimbo dzeUbuntu. Pane mumwe munhu angandiudza kuti dambudziko nderei? Nekuti kunyangwe ndikatarisisa sei, handisi kuiwana.
Isu tatova nezvisina maturo ...
Kana iwe ukaverenga ini handisi kuti shandisa mapakeji eWinbuntu repos, asi Winbuntu inounza yakawanda serial crap isingashandise kana yayo p ... amai.
Hupenzi kunyunyuta nezve inofungidzirwa kunetseka kwaDebian (iyo isipo, seshamwari hahahahaha) kana kutaura kuti Winbuntu ine akawanda mapakeji.
Zvinokubhadhara iwe yakawanda kuvhura terminal uye kuisa rairo yekumisikidza diki chirongwa, urikuenda herniate?
Ubuntu inounza boka rekupenga mapakeji zvinoenderana nekutenda kwaani? Wako? MuUbuntu kune akawanda mapakeji ayo muDebian asipo uye andinoshanda nawo, xaralx kukupa muenzaniso. Asi chokwadi, ini handizive kuti nei ndichizvinetesa kuyedza kutsanangura chimwe chinhu chausingade kunzwisisa ...
Oo idambudziko rakadii ... Unotora download tar.gz woisa. Mumwe anozofanirwa kushandira brachial hernia ...
Kana iwe unondibvunza sezvawakaita kanopfuura kamwe chete.
Mazhinji mapurogiramu eUbuntu anowanzoita kunge bullshit iyo isiri kushandiswa, uye ini ndanga ndichireva iwo anouya nekutadza, asi huya, kana usinga vereke zvakaipa, iwe uchaona
Handinzwi kuda kuita zvinhu nenzira yaunoita iwe. Tora iko kusvetuka mumusoro wako. Ini handidi kuumbiridza, ini handidi kushandisa basa, ini ndinongoda kuita:
Uye kuti iwo murairo unogadzirisa kutsamira, uye ini ndinoisa iko kunyorera. Usaedze kurarama hupenyu hwangu. Usauya kuzondiudza mararamire andinoita. Uye nenzira zvizadze nemazai uye usadimbure kubva kuGtalk (kana kusaenda usingaonekwe) kana iwe ukabvunzwa chimwe chinhu uye iwe usingade kupindura.
Mazhinji emapurogiramu eUbuntu anowanzoita kunge bullshit iyo isiri kushandiswa, uye ini ndanga ndichireva kune anouya nekutadza,
Unogona kundipa muenzaniso? Uye ini ndinodzokorora, urikutaura nezve zvaunofarira iwe, uye pamusoro pazvo zvese, haushandise Ubuntu saka chii chaunoziva icho vashandisi vanoshandisa kana kwete? Tora ongororo uine data rakasimba wozoburitsa maitiro ako mwana.
Bullshit iyo isingashandiswe ndiwo maitiro ako, kana semuenzaniso X mushandisi achida kushandisa Y application ... murume, wadii kumupa mukana wekuimisikidza uye kuishandisa neyakaipisisa nhamburiko. Hongu, ichokwadi kuti inogona kutorwa pasi nekunyorwa ... asi ruzhinji rwevashandisi veavice vanotya nazvo.
Uye nenzira zadza nemazai uye usadimbure kubva kuGtalk (kana usazviita usingaonekwe) kana iwe ukabvunzwa chimwe chinhu uye iwe usingade kupindura.
Mazhinji emitambo diki, madhiraivhi asina basa, zvirongwa zvisina kufanira, nezvimwe.
Usaedze kurarama hupenyu hwangu Usauya kuzondiudza mararamire andinoita
Unoyeuka here zvakaitika mumasango esimbi? Zvakanaka izvo
Elav kune zvese izvi, iwe wakaverenga iyo blog?
Ndeupi maonero ako nezvazvo ???
Nenzira, ini ndinofunga kuti ubuntu server yakafanana nedebian inst, asi chakashata ndechekuti haishandisi mapassword maviri, rimwe remidzi uye rimwe remushandisi, sezvinoita debian.
Handizive kana izvi zvakakosha kwandiri kwauri, hongu, ini handidi vashandisi vane rombo remidzi.
Mumwe mubvunzo: Ungaisa chero ssh sevhisi, myqsl uye / kana firewall nekambani ???
Ini ndinofungidzira kuti iyo backup iwe waizoshandisa chimwe chinhu senge bacula kana chimwe chakadai.
Yakakurudzirwa kuverenga: ubuntu server gwara kana ukasarudza kugadzirisa kunyange ...
Uye ini handisi kuzvitaura nekuti hauna ruzivo, kana zvisiri izvo zvekuti isu tinogara tichisiya zvinhu pane nhunzi!
Kwete, chokwadi ndakanga ndisina nguva nezuro. Nhasi ndinoramba ndakazvitarisa. Dambudziko reUbuntu neSudo kwandiri chinhu chakakomba, asi hapana chisingagadziriswe, chaizvo. Zvino seSeva ini ndinofunga Ubuntu haina basa (pachezvayo ruzivo). Iwo masevhisi anoiswa zvinoenderana nezvaunoda ...
SAKA Shinga pano ndinotya kuti isu tese tinofananidza zvinhu zviviri zvakasiyana, kugadzikana kwako uye ini kunyorera uye nezvimwe.
Ichokwadi kuti ubuntu haina kunyatsogadzikana asi uri kuzondiudza here kuti wekupedzisira debian akatsiga seyekupedzisira (debian5)
Ini ndinokuudza kubva pane zvakaitika kuti yakavhenganisa zvinyorwa nezvose uye haina kutyora (ndiri kutaura nezve5), handina kumboona distro yakagadzikana, zvinoita sei kuti isina kugadzikana + sid, inogara yakatsiga uye ngatiregei kutaura sid + kuyedza.
Uyai nekugadzikana kwayanga yakaita, zvainakidza.
Muna debian 6 pachinzvimbo izvo hazvina kuitika kwandiri ...
MuUbuntu izvo hazvigone kuitwa nekuti kana ukasawana kernel panic nekukurumidza ...
Kune maseva, ini handisi kushandisa Ubuntu sedambe ... nditende, zviitiko zvinotyisa.
Zvakanaka, ikozvino izvo zvandaifanira kuverenga ...
ruzhinji rwevashandisi vevadzidzi vanotya izvo.
Ya asi izvi hazvisizvo
Icho elav chinoreva nekuve nemamwe mapakeji, ndechekuti mune yepamutemo Ubuntu repo kune mamwe mafomu anowanikwa ekuisa kupfuura muDebian repos.
Ngatitii Ubuntu Server = Debian ...
Ini ndaida kutaura kuti ine zvakafanana uye kuti ubuntu server ndicho chinhu chepedyo kune debian inst pane ubuntu ine. Kana zvisiri zvechokwadi ndiudze kuti ndeipi ???
Icho Ubuntu ndicho chisina kugadzikana chiripo, ndosaka chakati
ona zvandakawana pawebhu AJAJAJAJAJAJAJAJA handigone kurega kuseka xD
ah richard stallman baba veGNU, chinhu choga chandinogovana nerusununguko, kwete hunhu hwaanoshandisa.
Kubva pane SAID kusvika pachokwadi, zviri kufamba zvakanaka…. #philosophy #gnu #linux #FSF
Hei, ndinofunga vamwe vanhu vangade kuona izvi (? http://www.taringa.net/posts/linux/10189925/Debian-y-Ubuntu-_Mitos-y-Verdades_-_Comparativa-2011_.html
Kwandiri kana ndapedza iyi Gyroscope kubva MuMoto
Iyi posvo yakavanzika chitunha
Inowanikwa vhezheni 3.3 yeLinux Kernel yakabatanidzwa neApple